Ogaden News Agency (ONA) – Trump oo Dalal Cusub Ku Daray Liiska Xayiraada Safarada.
Trump oo Dalal Cusub Ku Daray Liiska Xayiraada Safarada.
Posted by ONA Admin	/ September 26, 2017
Xayiraadan ayaa ka danbeeysay ka dib dib u eegis lagu sameeyay xaalada ammaanka iyo amar uu horey u soo rogay oo waqtigiisa imika dhacayo. Mr Trump ayaa sheegay in mudnaanta uu siinayo in Maraykanka uu noqdo ammaan .
Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in xeerarkan ay bartilmaamed ku yihiin dalal gaar ah. Maraykanka ayaa wadamada Suuriya iyo wuqooyiga Kuuriya ku soo rogay xayiraad buuxda halka Venezuela ay mamnuucida ku xaddidan tahay saraakiil ka tirsan dowlada iyo qoysaskooda.
Sudan ayaa laga reebay liiskii hore ee 6 dal ee muslimiinta u badnaa ee hore mamnuucida loogu soo rogay . Balse waxaa wali liiska ku jira wadamada ,Soomaaliya, Suuriya, Iran, libiya iyo Yaman. Amarkan cusub ayaa lagu wadaa in uu dhaqangalo 18 bisha october ee soo socota. Kisas looga soo horjeedo xayiraada ayaa waxa horey loo geeyay maxkamd si looga hortago in la dhaqangaliyo.